ဒူဘိုင်း - အားလုံးအရာအကြီးစားပြီးတော့အသေးစား - ယူအေအီးအတွက် Wendy Louise Nog ၏ခရီးစဉ်
အကြှနျုပျ၏ငယျရှယျသမီးနဲ့ကျွန်မဘယ်သူ၏ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးကဖီးတစ်ခုပြင်ပဟင်းလင်းပြင်၌ထိုင် အချိုပွဲနှင့်အတူပုံ နှင့်သက်တံ့သည်အရောင်၏ pastries နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောငြိမ်သက်ရေကူးကန်ကျော်ထဲကကြည့်ရှု။ ဝေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ကျနော်တို့ကဖေး၏သတ္တမအဆင့်တွင်ရှိကြ၏ သော Dubai Mall ၏အစွန်းတန်းစီ။ ထိုသို့ကျွန်တော်ထိုင်လေထုထဲတွင်မှုတ်များနှင့်ဝေးသောသဲမုန်တိုင်းပတျဝနျးကငျြအဆောက်အဦးများပေးသောအနည်းငယ်လိမ္မော်ရောင်တင့မှာအံ့ဩကြ၏။ နှစ်ပတ်အတွင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ကျနော်တို့လုံးဝငြိမ်ဝပ်ခံစားခဲ့ရ.
ကာလကတ္တားအတွက်မိသားစုသွားရောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကပုဒ်ဖြတ်ခဲ့သည် သငျသညျကိုတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းအစွန်းရောက်ဆန့်ကျင်ဘက် ဘယ်နေရာမှာမဆိုအိန္ဒိယအတွက်ခရီးသွားနှင့်သောအခါကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းရောက်ရှိလာခဲ့မျှမျှတတကောင်းစွာလှုပ်ခဲ့သည်။ လူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးနှင့်အတူတယောက်တည်းသာခရီးသွားလာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းခဲ့ ပင်ပန်းခဲ့ကြောင်းလိုအပ်သောအာရုံစိုက်ရွှင်လန်း။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ကြရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြ, ကြှနျုပျတို့လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်သင်တန်း၏, ထို Burj Kalifa မြင်ဘူး။
ကျနော်တို့ကနေယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့မီးရထားကိုယူ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်, အကြီးအကုန်တိုက်ရထားမှတ်တိုင်မှာမထွက်။ နှင့်ရွေ့လျားလမ်းဘေးစင်္ကြံများ၏-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှစင်္ကြံတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက် ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုရာခရီးသို့ရောက်ရှိသည်အထိ နှင့်ငါတို့သည်ထိုင်အနားယူ, ဤအသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ယူနိုင်ခဲ့ရာကဖီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နေထဲမှာထိုင် ကျွန်တော်တို့ကိုပတျဝနျးကငျြယင်းပတ်ဝန်းကျင်ဂီတကိုနားထောင်ခြင်း။ ကျွန်မခရီးသွား၏စိတ်ဖိစီးမှု, မှာအားလုံးဘာမှ ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, လုံးဝကွယ်ပျောက်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအပေါငျးတို့သခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့အတူတကွတွေ့ကြုံ, အံ့သြစရာရှိထိုင်လျက် သာဒူဘိုင်းခဲ့နိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုခံစားမှု.
အကြှနျုပျ၏ရည်ရွယ်ချက် ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြို့သွားရောက်လည်ပတ်ဘို့ ငါ၏အဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းကို client တစ်ခုပါရှစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်သူ Celebrity ရှစားဖိုမှူး Ariana Bundy, "Ariana ရဲ့ပါရှမီးဖိုချောင်" နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်တယ် အဆိုပါအံ့သြတော်ဝင် Atlantis ဟိုတယ် & Residences မှာ။ သူမ၏ရှအစားအစာနှင်းဆီ, ရွှေဝါရောင်, စိမ်းဝါနုရောင်နှင့်အတူထုံမွှန်းသည်, ရှေးချက်ပြုတ်နည်းများ၏အံ့သြဖွယ် menu ကို feature ပါလိမ့်မယ်။ သူမလည်းတစ်ဦးမှာ 300 နှစ်အရွယ်နေအိမ်သို့ပြန်လည်မွမ်းမံနေသည် တစ်ချက်ပြုတ်ကျောင်းနှင့်ဦးတည်ရာကိုတည်းခိုခန်းအဖြစ်အစေခံရန်သီးခြားတည်နေရာ.
သူမရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကြောင်းဒူဘိုင်း၏ဇာတ်လမ်းထင်ဟပ်။ ဒါဟာသင်အိပ်မက်မက်နိုင်မည့်နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်, အဲဒီအိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာစေပါသည်။ ဒါဟာဗိသုကာနှင့် developer များ, စားဖိုမှူးနှင့်ဒီဇိုင်နာများ, အနုပညာရှင်နဲ့ခရီးသွားများအတွက်တစ်ကစားကွင်းဖြစ်ပြီး, လုံးဝကိုသင်စိတ်ကူးနိုငျကွောငျးဘာမှဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, ကျွန်းများနှင့်အတူကမ္ဘာ့မြေပုံကိုအပါအဝငျ။ အနာဂတ်တောက်ပဒီတော့ဒီခရီးအပေါ်သူမ၏လိုက်ပါသွားကြဂုဏ်ပြုနှင့်အစားအစာအတွက်အထူးပြုတဲ့ Boutique က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီအဖြစ်ထားပြီး, ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုအထူးအလည်အပတ်ခရီးခဲ့သည်.
ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူယူနိုငျခဲ့ကွ Uber နေရာတိုင်း, ကြှနျုပျတို့ခဲ့တိုင်းဒရိုင်ဘာ, ကြင်နာဖော်ရွေ, သူတို့ရဲ့ဇစ်မြစ်နှင့်မိသားစုအကြောင်းကိုမျှဝေဖို့ပွင့်လင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းလုံးဝလုံခြုံသလိုခံစားရတယ်။ ဒူဘိုင်း၏နေထိုင်သူများအများစုလိုပဲ, အဆိုပါယာဉ်မောင်းအလွန်ကယ်လီဖိုးနီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏နေအိမ်သို့ကဲ့သို့ဖြစ်၏သောတစ်နေရာရာတခြားကနေအားလုံးရှိကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏သနားတျောမူအိမ်ရှင်ကိုတစ်လှည့်လည်ပေးခဲ့တယ် ကျနော်တို့တည်းခိုခဲ့ကြသည်ရှိရာဝန်းကျင်ဧရိယာနှင့်ရိုးရိုးစိတ်ထဲထူးခြားဆန်းကြယ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်အခြားနှင့် 100 မိုးမျှော်တိုက်၏သေးသောအခြားစပျစ်သီးပြွတ်အပေါ်သို့ရောက်ကြရန်။ အဆိုပါ အသစ်သောအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရေးနေရာတိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်, ထိုသို့သူတို့မြင့်မားရိန်းအောက်ထွန်းသစ်စခံရဖို့သလိုပဲသောမဖြစ်နိုင်ထောင့်အပေါ်အခြေခံပြီးပြီးဆုံးသောအခါသူတို့လိမ့်မည်ကိုမည်သို့မြင်စိတ်ကူးဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ Jumeirah အယ်လ် Qasr မှာညစာခဲ့ ကြယ်ငါးပွင့်အပန်းဖြေစခန်းနှင့်စွန်ပလွံပင်နှင့်အတူစီတန်းအဆိုပါတူးမြောင်းအားအပေါ်စီးမှ Lounge ၌ထိုင်။ တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာလှပသောစကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်၏တညျဆောကျခဲ့သညျ။ အစားအစာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရသာကြီးနှင့်စပျစ်ရည်ကိုလုံးဝကျွမ်းတဝင်မရှိသော, disorienting သောနှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာအံ့သြစရာ။
အဆိုပါအမြဲအနာဂတ် ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အတွက်ဒူဘိုင်းတွင်ကျင်းပခံရဖို့ဖြစ်တယ်, ဆောက်လုပ်ရေးပြီးသားစတင်နေပြီ, နိုင်ငံတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအားအကောင်းဆုံးဗိသုကာ၏အံ့သြကိုယ်စားပြုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ။ သုံးစွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပေါငျးတို့သစာရင်းပြုစုရန်သွေးဆောင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်း၏အံ့သြဖွယ်မြို့တော်ကိုရှာဖွေစူးစမ်းဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဤမျှလောက်ပိုပြီးပျော်စရာပါပဲ။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေပြန်လာပါလိမ့်မည်, နှင့်ကနေရွှေဝါရောင်-ထုံမွှန်းရေခဲမုန့်ကိုမြည်းစမ်းဖို့မစောင့်နိုင် Ariana ရဲ့ အဆိုပါငန်မျက်နှာကြက်အပေါ်စီးစားသောက်ဆိုင် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့မှာရေများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Portfolio ခုနှစ်တွင် Ariana ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရန် Link ကို:
Wendy Louise Nog တည်ထောင်သူ, Solutions ဗိသုကာ, အနာဂတ် BrightPhone: 415-275-0970
Skype ကို: WendyLouise
နေရပ်လိပ်စာ: 100 Shoreline အဝေးပြေး, အဆောက်အအုံ B, Suite 100
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်း၌ကောင်းသောလမ်းညွှန်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။